घरमा लगाउनुहोस् यी ३ बिरुवा, चुम्बक जसरी तान्ननेछ पैसा – Online Khabar 24
हिन्दु धर्ममा जति भगवानको पूजा गरिन्छ त्यति नै बोट बिरुवाहरुको पनि पूजा गर्ने गरिन्छ ।
धार्मिक आस्थाले बोट-बिरुवाको महत्व छुट्टै रहे पनि वास्तुशास्त्र अनुसार भने बोट-बिरुवाको हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छुट्टै महत्व रहेको छ ।
वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा बोट-बिरुवा नराख्नाले घरमा बस्नेलाई आर्थिक, शारीरक एवं मानसिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् । घरमा सुख-समृद्धि पाउनका लागि केही बोट-बिरुवा लगाउन जरुरी रहेको बताएको छ । कुन बिरुवा रोपे कस्तो लाभ हुने यसप्रकार रहेका छन् ।
१. फेंगु शुईको अनुसार बासको बिरुवा समृद्धि र प्रगतिको प्रतिक हुन्छ । यसलाई घरमा जहाँ पनि राख्न सकिन्छ । यसले घरमा भएको नकारात्मक उर्जालाई समाप्त गर्ने काम गर्दछ ।२. नरिवलको रुख पनि शुभ मानिन्छ । यसलाई घरमा राख्नाले घरको परिवारमा एक-अर्को प्रति प्रेम र सद्भावना बढाउँछ ।
४. घर बाहिर वृक्षहरु लगाउने ठाउँ नभए घर भित्र मनी प्लान्ट लगाउन सकिन्छ । चाईनिज बास जस्तै यो वृक्ष पनि समृद्धिदायक बिरुवा मानिन्छ । मनि प्लान्ट रोपिसकेपछि त्यसको बिग्रिएको पातहरु भने समयमा नै टिप्नु पर्दछ । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevनेपाली फिल्ममा सुनिल सेट्टी अनुबन्धित, लिनेछन् यति धेरै पारिश्रमिक !
nextआफ्नो लक्की नम्बर कसरी थाहा पाउने ? यस्तो छ जन्म मिति अनुसार लक्की नम्बर थाहा पाउने तरिका